PEACEFUL PA: September 2010
ပျားရည် နဲနဲ ယူသွားပါ. . . . . မှ (၂)
ပျားရည်နဲနဲ ယူသွားပါ . . . . . မှ (၂)
"Takealittle honey with you" by Dr. Harvey H. Springer ( 1907- 1962)
တည… မူးဒီအသင်းတော်က သင်းထောက်တယောက် ဘုရားကျောင်းက ပြန်လာတယ်။ သုညအောက်အထိ အေးခဲနေချိန်ပါ။ ကလေးတယောက် ဖိနပ်မပါဘဲ ချိုင်းထောက်ကို အားပြုရင်း သတင်းစာရောင်းနေတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ အိပ်ကပ်ကိုနှိုက်ကြည့်တော့ ရှိသမျှကို အထူးအလှူငွေအတွက် ပေးခဲ့ပြီးပြီ။ ပန်းသီးတလုံးတော့ ရှိတယ်။ အိပ်ကပ်ထဲက ပန်းသီးကို ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ ခဏ စကားပြောပြီးတော့ ကလေးကို သူ့အိမ်ရှိရာ ခေဓလာခဲ့တယ်။
နောက်တော့ အဲဒီကလေးဟာ မူးဒီအသင်းတော်မှာ ကယ်တင်ခြင်းရပြီး၊ လူချမ်းသာတယောက်အဖြစ် ကြီးပြင်းလာတယ်။ သူဟာ Sunday post စာစောင်အရ အာမခံကုမ္ပဏီတခုကို ဒေါ်လာ ၅၃ သန်းနဲ့ ရောင်းချခဲ့သူပါ။ သူ့ရဲ့ ဆယ်ဖို့တဖို့ အလှူငွေနဲ့ ကမ္ဘာတဝန်းက သာသနာပြုဆရာတွေကို ထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်။
ကောင်ကလေးကို ကူညီခဲ့တဲ့လူဟာ သူ့ကျန်းမာရေးကြောင့် Phoenix ဖီးနစ်မြို့ကို ပြောင်းခဲ့တယ်။ အဲဒီမြို့မှာ သူ့ရဲတိုက်ကြီးကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီရဲတိုက်ကြီးကို ကလေးလေး တဖြစ်လဲ Mr. Johnson ဆောက်တာပါ။ Pepsi Cola အချိုရည်ဟာ သူထုတ်တာပါ။ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တခုရောက်တိုင်း၊ အဲဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ ကျမ်းစာ ဘာသာပြန်ထားတာ တွေ့ရရင်၊ ဘာသာပြန်ကျမ်းစာ ၁၀၀ မှာ ၉၉ ကျမ်းလောက်ဟာ Mr. Johnson ပေးလှူခဲ့ အဖွဲ့အစည်းအားဖြင့် ဖြစ်လာတာပါ။ ရေဒီယိုမှာ Charles Fuller နှစ်ပေါင်းများစွာ တရားဟောအလုပ် ဆက်လုပ်နိုင်တာ အံ့သြစရာပါ။ တနင်္လာမနက်တိုင်းမှာ Mr. Johnson ရယ်၊ သူ့ဇနီး (ဒါမှမဟုတ်) သူ့သမီးတို့ဟာ Mr. Fuller ရဲ့ ရုံခန်းကိုသွားပြီး၊ "ဒီနေ့၊ ဆရာ ဘာလိုသလဲ" လို့မေးပါတယ်။ ပြီးရင် ချက်လက်မှတ် ထုတ်ပေးပါတယ်။ ရေဒီယိုအတွက် ပေးစရာတွေ အမြဲပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Mr. Johnson အသက်ရှင်ချိန်တလျှောက်လုံး သူတို့မှာ ဘာတခုမှ မလိုအောင် ဖြည့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါတွေအားလုံးရဲ့ အစက ဘာလဲ။ အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ ချိုင်းထောက်နဲ့ ကောင်ကလေးကို သင်းထောက်တယောက်က ရှီကာဂြိုမို့လမ်းမပေါ်မှာ အကြင်နာ ပျားရည်ပေးခဲ့တာပါပဲ။ ။
Posted by Papa at 10:01 PM
Love your Enemy - Son of Hamas ရန်သူကို ချစ်ပါ
Son of Hamas သူ့အကြောင်းက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ နာမည်က Moseb Hassan Yousef ။ ပါလက်စတိုင်းဒေသ အနောက်ဖက်ကမ်းခြေကပါ။ အဖေက Hamas အဖွဲ့ကို တည်ထောင်ခဲ့သူတွေထဲက တယောက်။ အစ္စရေးတွေရဲ့ ဖမ်းဆီး၊ နှိပ်စက်၊ အကျဉ်းချခံရပြီးနောက်၊ ဟားမတ်စ်တွေကလည်း အချင်းချင်း ပြန်နှိပ်စက်တာတွေ မြင်လာတဲ့နောက်မှာ အစ္စရေး ထောင်လှမ်းရေး Shin Bet အဖွဲ့ အတွက် S-p-y လုပ်ဖို့ သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကို Green Prince အစိမ်းရောင် မင်းသားကလေးလို့ လျှို့ဝှက်နာမည်နဲ့ ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီနောက် သမ္မာကျမ်းစာကို စတင် လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ မဿဲ ၅း ၄၃- ၄၅ မှာ ပြောတဲ့ သခင်ယေရှုရဲ့ စကားကို စွဲလန်းသွားတယ်။ " ကိုယ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောသူကို ချစ်လော့။ ရန်သူကို မုန်းလော့ ဟူသော ပညတ်စကားကို သင်တို့ကြားရပြီ။ ငါပညတ်သည်ကား၊ သင်တို့သည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသော သင်တို့အဘ၏ သားဖြစ်လိုသောငှါ၊ သင်တို့၏ ရန်သူတို့ကို ချစ်ကြလော့။ " ခရစ်ယာန်မဖြစ်သေးပေမယ့် ဒီစကားတွေက သူ့ဘဝကို အစ္စရေးတွေအတွက် S-p-y လုပ်ရင်း၊ သူ့အဖေအတွက်လည်း ကာကွယ်ပေးဖို့ ဖြစ်လာစေခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ သူ ခရစ်ယာန် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အင်္ဂလိပ်နာမည်ကတော့ Joseph ပါ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ ငြိမ်းချမ်းဖို့ သူ့ အမြင်ကတော့ " ရန်သူကို ချစ်ပါ " " Love your enemies " ဖြစ်ပါတယ်။
ဥရောပရဲ့ ဖိနှိပ်မှုခံခဲ့ရတဲ့ အစ္စရေးဟာ ပါလက်စတိုင်းကို ဖိနှိပ်လာတယ်။ ဖိနှိပ်ရာက လွတ်လာတဲ့ မူဆလင်ဟာ ဖိနှိပ်သူဖြစ်လာပြန်တယ်။ အဲဒီတော့ တကယ့် ရန်သူအစစ်က ကိုယ့်အထဲမှာပါ။ ပါလက်စတိုင်း ပြဿနာကို အဖြေမရှာနဲ့ဦး။ တယောက်နဲ့ တယောက် အရင်ဖက်ရဲဖို့ ကြိုးစာပါဦးလို့ သူကဆိုပါတယ်။ အဖြေက သမ္မာတရား၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ခွင့်လွှတ်ခြင်းပါတဲ့။ သူဟာ အခုတော့ ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ နေပြီး၊ နှစ်ခြင်းအသင်းတော်တပါးမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ သူဟာ အမေရိကန် စာရေးဆရာတယောက်ရဲ့ အကူအညီယူပြီး သူ့အကြောင်းကို Son of Hamas ဆိုတဲ့ စာအုပ်အဖြစ် ထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။ စာအုပ်တန်ဖိုးက ၂၆.၉၉ ဒေါ်လာပါ။ www.sonofhamas.com ဆိုတဲ့ Website ကိုလည်း တင်ထားပါတယ်။ အဲဒီမှာ စာအုပ်ရဲ့ အခန်း ၁ ကို စာဖိုင်အပြင်၊ အသံဖိုင်ပါ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီအပြင် သူနဲ့ Dr. Jack Schaap ရဲ့ တနာရီ ၁၅ မိနစ်စာ အင်တာဗြူး အသံဖိုင်ကိုလည်း အခမဲ့ ရနိုင်ပါတယ်။
ဒီကြားထဲ အရေးထဲ အရာပေါ်တာကတော့ အမေရိကန် Homeland security ဌာနပါပဲ။ အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုပြီး သူ့ကို ပြည်နှင်ဒဏ်
ပေးချင်နေပါတယ်။ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးရင်တော့ သူ့ကို ဟိုရောက်ရင် သတ်ကြမှာပဲ။ အမှန်က သူရောက်လာတာ မသိကြပဲ၊ သူကိုယ်တိုင် သွားရောက်သတင်းပို့မှ သိကြတာကို ရှက်ရမ်းရမ်းတာလို့ ဆိုပါတယ်။ သူကတော့ " ဒါဟာ အခု အချိန်မှာ မဖြစ်သင့်သေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်နိုင်ငံကို ကျွန်တော် ချစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် လူမျိုးကို ကျွန်တော် ချစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် မိဘ ညီအကို မေင်နှမတွေက အဲဒီမှာပါ။ ကျွန်တော် သိပ် သတိရပါတယ်။ ကျွန်တော် ပုန်း ရှောင်ဖို့ မကြိုးစားပါဘူး။ ကျွန်တော် လုပ်နေတာကို ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဟိုတုန်းကတောင် မှားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ သေသွားနိုင်တာပဲ။ အခု မှန်ကန်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသက်ပေးရမယ်ဆိုရင်လည်း ပေးပါမယ် " လို့ ဆိုပါတယ်။
Posted by Papa at 12:39 PM
Quotations (September) အဆိုအမိန့် -